ဘယ်လေယာဉ်တွေစီးပြီး ခရီးနှင်ကြမလဲ? | ဆန်းသစ်မြန်မာ
Home News ဘယျလယောဉျတှစေီးပွီး ခရီးနှငျကွမလဲ?
ပွငျသဈမှာ ပွုလုပျတဲ့ Skytrax ရဲ့လကွေောငျးပွပှဲကွီးမှာ ၂၀၁၇ခုနှဈရဲ့ ကမ်ဘာ့ အကောငျးဆုံး လကွေောငျးလိုငျးအဖွဈ ကာတာ လကွေောငျးလိုငျးကို ရှေးခယျြခြီးမွှငျ့ခဲ့ကွတယျလို့ CNN သတငျးအရသိရပါတယျ။ ပွငျသဈမှာပွုလုပျတဲ့ ဒီလကွေောငျးပွပှဲဟာ ၅၂ ကွိမျမွောကျ လကွေောငျးပွပှဲလညျးဖွဈပါတယျ။ ကာတာလကွေောငျးလိုငျးဟာ ၂၀၁၁ ခုနှဈကတညျးက စပွီး လေးကွိမျမွောကျရရှိခဲ့တဲ့ဆုလညျးဖွဈပါတယျ။
၁၉၉၇ ခုနှဈမှာမှ စတငျထူထောငျခဲ့တဲ့ ကာတာလကွေောငျးလိုငျးဟာ အရှိနျအဟုနျနဲ့ တိုးတကျလာပွီး ကမ်ဘာ့တိုကျကွီး ခွောကျတိုကျကို ပတျကာ ဝနျဆောငျမှုပေးနတေဲ့ လကွေောငျးလိုငျးလညျးဖွဈပါတယျ။ ကာတာနိုငျငံ ဒိုဟာကနေ လယောဉျပေါငျး ၁၇၄ စငျးနဲ့ ခရီးစဉျပေါငျး ၁၅၀ ကို ပွေးဆှဲပေးနပေါတယျ။ ဒီလိုအောငျမွငျနတေဲ့ လကွေောငျးလိုငျးတဈခုဖွဈပမေယျ့ ပွောဆိုစရာကိစ်စရပျတှနေဲ့ ရငျဆိုငျနရေပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ အစ်စလာမျမဈ အကွမျးဖကျတှကေို အထောကျအပံ့ပေးနတေယျလို့ စှပျစှဲခံနရေတဲ့ နိုငျငံတှငျးက ပွဿနာတှကွေောငျ့ ခရီးစဉျ ၁၈ ခု ဆုံးရှုံးခဲ့ရပွီး တဈနေ့ လယောဉျခရီးစဉျ ၅၀ အထိ ရပျနားခဲ့ရပါတယျ။
ဒုတိယ အကောငျးဆုံး လကွေောငျးလိုငျးကတော့ အာဆီယံဒသေရဲ့ အခမျြးသာဆုံးနိုငျငံက စငျကာပူလကွေောငျးလိုငျး (Singapore Airline)ဖွဈပါတယျ။ စငျကာပူလကွေောငျးလိုငျးက အာရှမှာတော့ အကောငျးဆုံး လကွေောငျးလိုငျးဖွဈပါတယျ။
တတိယကတေ့ ဂပြနျလကွေောငျးလိုငျးတဈခုဖွဈတဲ့ ANA ဖွဈပါတယျ။ ANA ကို ကမ်ဘာ့လဆေိပျဝနျဆောငျမှု အကောငျးဆုံး ဆုတဈဆုကိုလညျး ပေးအပျခြီးမွှငျ့ပါသေးတယျ။
စတုတ်ထမွောကျ အကောငျးဆုံးလကွေောငျးလိုငျးကတော့ ဒူဘိုငျးအခွစေိုကျ Emirates လကွေောငျးလိုငျးဖွဈပါတယျ။ ယမနျနှဈကလညျး ဒီဆုကိုရရှိခဲ့သလို လယောဉျစီး ခရီးသညျမြားအတှကျ အကောငျးဆုံး ဖြျောဖွတေငျဆကျမှုဆုကိုလညျး ရရှိခဲ့ပါတယျ။
ဟောငျကောငျအခွစေိုကျ Cathay Pacific ကတော့ ပဉ်စမဆုကို ဆှတျခူးရရှိခဲ့ပါတယျ။
ခုနောကျပိုငျးမှာ အလငျြအမွနျတိုးတကျလာနတေဲ့ ထိုငျဝမျပိုငျ EVA လကွေောငျးလိုငျးကတော့ ကမ်ဘာ့ ဆဌမ နရောကို ရရှိခဲ့ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ EVA ဟာ စီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျတှစေီးတဲ့ အထူးတနျး ကောငျးဆုံးဆုနဲ့ လယောဉျအတှငျးပိုငျး သနျ့ရှငျးမှု အရှိဆုံးဆုကိုလညျး ဆှတျခူးရရှိခဲ့ပါသေးတယျ။
ဥရောပမှာ အကောငျးဆုံးလကွေောငျးလိုငျးတဈခုဖွဈတဲ့ ဂြာမဏီရဲ့ Lufthansa ကတော့ ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံး သတ်တမဆုကို လကျခံရရှိခဲံပါတယျ။
ယူအအေီးပိုငျ Etihad လကွေောငျးလိုငျးကတော့ ယခငျနှဈ ဆဌမနရောကနေ အဌမမွောကျနရောကို ကဆြငျးသှားခဲ့ပါတယျ။ ဒီလကွေောငျးလိုငျးက ပထမတနျး အကောငျးဆုံးဆုကိုလညျး ရရှိခဲ့ဖူးတဲ့ လကွေောငျးလိုငျးတဈခုလညျးဖွဈပါတယျ။
ကမ်ဘာ့အကောငျးဆုံး နဝမမွောကျလကွေောငျးလိုငျးကတော့ တရုတျနိုငျငံရဲ့ အကောငျးဆုံး လကွေောငျးလိုငျးတဈခုဖွဈတဲ့ Hainan လကွေောငျးလိုငျးဖွဈပါတယျ။ ယခငျက ကမ်ဘာ့အဆငျ့ (၂၂)ကနေ အဆငျ့ (၉) အဖွဈသို့ အရှိနျအဟုနျကောငျးကောငျးနဲ့ တိုးတကျလာတာဘဲ ဖွဈပါတယျ။
Top Ten ရဲ့ နောကျဆုံးပိတျ လကွေောငျးလိုငျးကတော့ Garuda Indonesia လကွေောငျးလိုငျးပဲဖွဈပါတယျ။
Zawgyi Font : ဘယ်လေယာဉ်တွေစီးပြီး ခရီးနှင်ကြမလဲ?
ပြင်သစ်မှာ ပြုလုပ်တဲ့ Skytrax ရဲ့လေကြောင်းပြပွဲကြီးမှာ ၂၀၁၇ခုနှစ်ရဲ့ ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံး လေကြောင်းလိုင်းအဖြစ် ကာတာ လေကြောင်းလိုင်းကို ရွေးချယ်ချီးမြှင့်ခဲ့ကြတယ်လို့ CNN သတင်းအရသိရပါတယ်။ ပြင်သစ်မှာပြုလုပ်တဲ့ ဒီလေကြောင်းပြပွဲဟာ ၅၂ ကြိမ်မြောက် လေကြောင်းပြပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကာတာလေကြောင်းလိုင်းဟာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်ကတည်းက စပြီး လေးကြိမ်မြောက်ရရှိခဲ့တဲ့ဆုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
၁၉၉၇ ခုနှစ်မှာမှ စတင်ထူထောင်ခဲ့တဲ့ ကာတာလေကြောင်းလိုင်းဟာ အရှိန်အဟုန်နဲ့ တိုးတက်လာပြီး ကမ္ဘာ့တိုက်ကြီး ခြောက်တိုက်ကို ပတ်ကာ ၀န်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ လေကြောင်းလိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကာတာနိုင်ငံ ဒိုဟာကနေ လေယာဉ်ပေါင်း ၁၇၄ စင်းနဲ့ ခရီးစဉ်ပေါင်း ၁၅၀ ကို ပြေးဆွဲပေးနေပါတယ်။ ဒီလိုအောင်မြင်နေတဲ့ လေကြောင်းလိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် ပြောဆိုစရာကိစ္စရပ်တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အစ္စလာမ်မစ် အကြမ်းဖက်တွေကို အထောက်အပံ့ပေးနေတယ်လို့ စွပ်စွဲခံနေရတဲ့ နိုင်ငံတွင်းက ပြဿနာတွေကြောင့် ခရီးစဉ် ၁၈ ခု ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး တစ်နေ့ လေယာဉ်ခရီးစဉ် ၅၀ အထိ ရပ်နားခဲ့ရပါတယ်။
ဒုတိယ အကောင်းဆုံး လေကြောင်းလိုင်းကတော့ အာဆီယံဒေသရဲ့ အချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံက စင်ကာပူလေကြောင်းလိုင်း (Singapore Airline)ဖြစ်ပါတယ်။ စင်ကာပူလေကြောင်းလိုင်းက အာရှမှာတော့ အကောင်းဆုံး လေကြောင်းလိုင်းဖြစ်ပါတယ်။
တတိယကတေ့ ဂျပန်လေကြောင်းလိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ANA ဖြစ်ပါတယ်။ ANA ကို ကမ္ဘာ့လေဆိပ်ဝန်ဆောင်မှု အကောင်းဆုံး ဆုတစ်ဆုကိုလည်း ပေးအပ်ချီးမြှင့်ပါသေးတယ်။
စတုတ္ထမြောက် အကောင်းဆုံးလေကြောင်းလိုင်းကတော့ ဒူဘိုင်းအခြေစိုက် Emirates လေကြောင်းလိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ယမန်နှစ်ကလည်း ဒီဆုကိုရရှိခဲ့သလို လေယာဉ်စီး ခရီးသည်များအတွက် အကောင်းဆုံး ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုဆုကိုလည်း ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ဟောင်ကောင်အခြေစိုက် Cathay Pacific ကတော့ ပဉ္စမဆုကို ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ပါတယ်။
ခုနောက်ပိုင်းမှာ အလျင်အမြန်တိုးတက်လာနေတဲ့ ထိုင်ဝမ်ပိုင် EVA လေကြောင်းလိုင်းကတော့ ကမ္ဘာ့ ဆဌမ နေရာကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် EVA ဟာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေစီးတဲ့ အထူးတန်း ကောင်းဆုံးဆုနဲ့ လေယာဉ်အတွင်းပိုင်း သန့်ရှင်းမှု အရှိဆုံးဆုကိုလည်း ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။
ဥရောပမှာ အကောင်းဆုံးလေကြောင်းလိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဂျာမဏီရဲ့ Lufthansa ကတော့ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး သတ္တမဆုကို လက်ခံရရှိခဲံပါတယ်။
ယူအေအီးပိုင် Etihad လေကြောင်းလိုင်းကတော့ ယခင်နှစ် ဆဌမနေရာကနေ အဌမမြောက်နေရာကို ကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။ ဒီလေကြောင်းလိုင်းက ပထမတန်း အကောင်းဆုံးဆုကိုလည်း ရရှိခဲ့ဖူးတဲ့ လေကြောင်းလိုင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး န၀မမြောက်လေကြောင်းလိုင်းကတော့ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အကောင်းဆုံး လေကြောင်းလိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Hainan လေကြောင်းလိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ယခင်က ကမ္ဘာ့အဆင့် (၂၂)ကနေ အဆင့် (၉) အဖြစ်သို့ အရှိန်အဟုန်ကောင်းကောင်းနဲ့ တိုးတက်လာတာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Top Ten ရဲ့ နောက်ဆုံးပိတ် လေကြောင်းလိုင်းကတော့ Garuda Indonesia လေကြောင်းလိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
Previous article ဆီးရီးယားတိုကျလယောဉျကို ပဈခမြှုနှငျ့ပတျသတျပွီး အမရေိကနျကို သတိပေးလိုကျတဲ့ ရုရှား
Next article မိုရာတာရဲ့အပွောငျးအရှနေဲ့ပတျသကျပွီး ရီးရဲလျဥက်ကဌရှငျးလငျး